Lewandowski oo hal fariin u diray guddiga kooxda Bayern Munich, kahor bilaabashada xili ciyaareedka cusub – Gool FM
Waatee kooxda kalsoonida ku qabta inay sameyn doonto saxiixa Jadon Sancho bisha Janaayo?… (Ma Barca, Real, Man Utd mise Liverpool?)
“Lionel Messi ma ahan ciyaaryahanka ugu fiican taariikhda” – Ronaldinho
Kooxdee ayeey jeclaan laheyd Liverpool inay ku aado wareega 16-ka ee UCL?… Waxaa ka jawaabaya Xherdan Shaqiri
UEFA oo shaacisay shaxda kooxdii ugu fiicneyd kulamadii Lixaad ee toddobaadkan laga ciyaaray Champions League
“Heshiiska Barcelona waa xalka ugu fiican ee qof walba” – Aabaha dhalay Neymar Jr
Dajiye July 17, 2019
(Yurub) 17 Luulyo 2019. Weeraryahanka Bayern Munich ee Robert Lewandowski ayaa ku booriyay guddiga kooxda inay u dhaqaaqaan suuqa kala iibsiga ee xagaaga, si naadiga ay ugu xoojiyaan ciyaartoy badan ee cusub.
Hadalka Robert Lewandowski ayaa wuxuu imaanayaa kaddib shir jaraa’id uu maanta ku qabtay magaalada Los Angeles, halkaasoo ay kooxda Bayern Munich ugu diyaar garoobeyso xili ciyaareedka cusub.
Kooxda Bayern Munich ayaa waxay haatan isku diyaarineysaa kulankeeda ugu horeeyay ee saaxiibtinimo ay caawa saqda dhexe kula ciyaari doonto Arsenal, kahor inta aysan 21-ka bishan Luulyo la ciyaarin Real Madrid.
Hadaba Robert Lewandowski ayaa inta uu ku sugqnaa shirkiisan jaraa’id wuxuu gudiga kooxdiisa Bayern Munich u diray fariintan wuxuuna yiri:
“Bayern Munich waxa ay u baahan tahay ciyaartooy badan ee cusub, si ay ugu yaraan u awoodo inay wax ka qabato caqabadaha hortaagan”.
“Way adag tahay in loo tartamo ku guuleysiga koobabka waaweyn, iyadoo aan sidaas la sameynin”.
“Haddii aan runta ka hadlo, Bayern Munich kuma filna tirada ciyaartoyda xirfadlayaasha ah ee haatan ku sugan, haddii aad dooneyso inaad ku guuleysato koobab, waa inaad kooxda xoojisaa”.
“Matthijs de Ligt waa sida Zlatan Ibrahimović” - Mino Raiola